Somaliland: Madaxweyne Siillaanyo Oo Markii U Horreysay Ka Shaaciyey Awaamiir Sharciga Dhadhansiinaya Shaqaallaha Dawaldda Ee U Kala Jiibiya Jileyaasha Ku Loollamaya Saaxadda Siyaasadda - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Madaxweyne Siillaanyo Oo Markii U Horreysay Ka Shaaciyey Awaamiir Sharciga Dhadhansiinaya...
Madaxweyne Siillaanyo Oo shalay Shaaciyey Amar Ay Digniinni Ku Lingaxan Tahay Oo Il-gaar Ah Ku Eegaya Cid Kasta Oo Ku Milanta Tartanka Xisbiyada Qaranka
“Shaqaallaha Dawladda Waxaan Uga Digayaa Qabyaalladda Iyo Inay Loollanka Siyaasadda & Tartanka Xisbiyada Qaranka Ku Milmaan”
“Waxaan Hay’adaha Dawliga Ah Farayaa Inay Il Gaar Ah Ku Eegaan, Tallaabo Ku Habboonna Ka Qaadaan Cid Kasta Oo Ay Ku Caddaato Falal Ka Dhan Ah Anshaxa & Xeerka Shaqaallaha Dawladda”
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa shaqaalle weynaha kala duwan ee dawladda uga digay inay ku milmaan isla markaana ka dhex muuqdaan saaxadda siyaasadda ee ay ku loollamayaan jilayaasha ku hirdamaya tartanka u dhexeeya. Madaxweyne Siilaanyo oo maalintii shalay ahayd ka qayb galay xaflad loo sameeyey qalinjebinta dufcaddii shanaad ee ka baxda Machadka shaqaallaha dawladda ee loo soo gaabiyo CSI (Civil Service Institute) ee magaallada Hargeysa. Qalinjebinta dufcaddan oo lagu qabtay Hotelka Maansoor ee magaallada Hargeysa ayaa madaxweynaha oo khudbad dheer ka jeediyey waxaa uu kaga hadlay aarimo ay kamid yihiin tirada ay shaqaallaha dawladdu ka koobnaayeen markii uu xilka la wareegay lix sanno iyo jarjar horteed, isaga oo tilmaamay in mudadii uu xilka hayay uu korodh badani ku yimi shaqaallaha dawladda tiradooda, isla markaana ay xukuumaddiisu ku dedaashay in tiradaas korodhay ay ku ladho tayada ay shaqaallaha dawladdu leeyihiin. Khudbadda madaxweynaha oo aad u dheerayd isla markaana dhinacyo kala duwan khusaysay waxaa uu ku bilaabay sidan: “Farxad weyn ayey ii tahay, inaan ka soo qayb galo Munaasibaddan lagu maamuusay mas’uuliyiinta ka tirsan Shaqaalaha Dawladda, ee maanta [Shalay] ka qalin-jebinaya Mac-hadka Shaqaalaha Dawladda. Ugu horreyn, waxaan u hambalyeynayaa Mas’uuliyiintan qalin-jebisay iyo Macalimiintii tacabka badan galisay. Sidoo kale, waxaan u hambalyeynayaa Waalidiinta, Madaxda Wasaaradaha ay ka tirsan-yihiin iyo Maamulka Mac-hadka Shaqaalaha Dawladda. In kasta oo aad gaadheen guul weyn oo noloshiina iyo ta qarankaba saamayn weyn ku leh, waxaan idin leeyahay waxbarashadu ma dhammaato, lagamana gaboobo, ee halkaa ka sii wada aqoon-korodhsiga iyo dadeelka waxbarashada. Waxa kale oo la idiinka baahan-yahay in aad uga faa’iidaysaan aqoontan aad barateen, adeeggii aad ummaddiina u hayseen. Xisbiga KULMIYE markii uu xilka dalka la wareegay tirada shaqaalaha qaranku waxay dhammayd 6,959, kuwaas oo la shaqo galiyey muddo 19-sanno ah. Xukuumaddaydu waxay shaqaalaysiisay muddadii 6-da sanno iyo 3-da bilood ahayd ee ay talada dalka haysay 9,346 shaqaale. Waxaanu xoog saarnay in aanu shaqo abuurno, isla markaana shaqaalaha qaranka ku soo kordhinno da’yar fir-fircoon oo aqoon leh. Dhinaca kale, waxaanu xoog saarnay in la tayeeyo, waxna la baro Shaqaalaha Dawladda, si loo helo shaqo fiican oo hufan. Muddadaa waxa wax-la-baray oo mac-hadkan ka qalin-jabiyey shaqaale dhan 3,487 oo isugu jira taba-barro gaagaaban (Short Courses), Diploma, Degree iyo Master. Waxaanu xoog saarnay dhismaha iyo Tayeynta Mac-hadka Shaqaalaha oo ah Manbaca iyo Madasha lagu beero shaqaale tayo leh. Kharashka ku baxa Mac-hadkan Shaqaalaha Dawladda waxa dabooli jiray intiisa badan Hay’adda UNDP, waana uga mahad-naqaynaa, Xukuumaddii naga horreysayna waxay bixin jirtay 19%. Xukuumadda KULMIYE iyada oo tixgelinaysa ahmiyadda waxbarashada, iyo muhiimmada mac-hadkani ku fadhiyo, waxaannu la wareegnay, isla markaana daboolnay dhammaan kharashyadii uu u baahnaa, 100%. Sidaa darteed, sharaf weyn bay, inoo tahay in uu maanta Mac-hadka Shaqaalaha Dawladdu yahay mid qaran, oo Dawladdu iskeed u maamusho. Waxaan si gaar ah u hambalyeynayaa is-beddelka iyo horumarka, ay ku talaabsadeen Maamulka Hay’adda Shaqaalaha Dawladda iyo Maamulka Mac-hadka Shaqaalaha Dawladdu. Waxaana tusaale fiican oo lagu dayan karo ah, dhallinyaradii aan xillalka sare u magacaabay is-beddelka laxaadka leh ee ay keeneen. Waxaan ugu baaqayaa Shaqaalaha Dawladda in ay xilka ay qaranka u hayaan u gutaan si dedaal iyo daacadnimo leh. Waxaan uga digayaa in ay ku milmaan Loolanka Siyaasadda iyo Tartanka Xisbiyada Qaranka. Waxaan uga digayaa qabyaaladda, iyo inay ku kacaan falal qarankan dumin kara. Waxaan farayaa mas’uuliyiinta Wasaaradaha iyo Hay’adaha Dawliga ah, gaar ahaan Hay’adda Shaqaalaha Qaranka, in ay il-dheer ku eegaan arrimahaas, isla markaana talaabo ku habboon ka qaadaan, cid kasta oo ku kacda, ama ay ku caddaato, fallal ka dhan ah Anshaxa iyo Xeerka Shaqaalaha Dawladda. Ugu danbayn, waxaan ALLAHEENA WEYN ka baryayaa in uu abaarta ba’an ee dhulkeena ka jirta inaga jebiyo. Maalmahan soo socda, waxaannu dardar-gelin doonnaa gurmadka abaaraha saameeyey Gobollada Dalka qaar ka mid ah. Si hor-dhac ah, waxaan shacbigayga qiimaha badan ugu baaqayaa in u diyaar-garow buuxa loo galo taakulaynta dadka abaaruhu tabaaleeyeen”. Waxa iyana munaasibadaa khudbado ka jeediyey Gudoomiyaha Hay’adaha Shaqaalaha Dawlada, Mudane Sharmake Axmed Muxumed, oo isagu dardaaran u jeediyey shaqaalaha dawlada sidoo kalena digniin u diray hay’adaha dawliga ah, waxa iyana halkaa ka hadlay agaasimaha Macadka Shaqaalaha Dawlada, Mudane. Guuleed Cumar Siciid iyo Agaasime ku xigeenka Macadka shaqaalaha, Mudane Xirsi Cabdilaahi Ismaaciil, Wasiirka shaqada iyo Arrimaha Bulshada, Mudane Cumar Sheekh Maxamed Faarax (Cumar yare) iyo Gudoomiyaha Xisbiga mucaaridka ah ee UCID, Eng Faysal Cali Waraabe. Oo dhamaantood ku dheeraaday qiimaha ay aqoontu u leedahay shaqaalaha dawlada iyo in la tayeeyo shaqaale weynaha dalka, kuna hambalyeeyey ardaydaa dhamaysatay waxbarashada aqoonta ay barteen. Ugu dambayn waxa uu madaxweynuhu shahaadooyin gudoonsiiyey masuuliyiin dhawra oo Macadka Shaqaalaha Dawladu ku abaal mariyey dedaalka iyo kartida ay u muujiyeen machadkaasi mudadii uu shaqaynaayey iyo ardaydii kaalmaha koowaad iyo labaad ka galay machadka shaqaalaha dawlada ee maanta qalinjebiyey.